You nwere ume zuru ezu maka Nkịta Ọhịa Australia? - Dịrị
A makwaara dị ka Blue Heeler, Australian Heeler, Red Heeler, Halls Heeler, ma ọ bụ Queensland Heeler, Australian Cattle Dog bụ ụdị pụrụ iche mara maka uwe mwụda ya.
N'inwe agwa dị ike na isi ike, nkịta ndị a mara mma abụghị ezigbo enyi maka mmadụ niile.
Nọgidenụ na-agụ iji chọpụta ihe ndị ọzọ banyere nkịta a ka anyị na-agụpụta akụkọ ihe mere eme ha, na-ekpughe àgwà ha, ma chọpụta ihe na-eme ha akọrọ.
Ebee ka Nkịta Ehi Australia si malite?
Kedu ihe Blue ma ọ bụ Red Heeler dị?
Ndi nkita anu ulo Australia bu ezi anu ulo?
Ilekọta otu Nkịta Ọhịa Australia
Ogologo oge ole ka nkịta Cattle Australia dị?
Ego ole ka Blue Heeler na-efu?
Blue Heelers agwakọta
Uru na ọghọm nke ị nweta Dog Ehi Australia
Udiri anumanu di na Blue Heelers
Dị ka aha ha na-egosi, e mepụtara nkịta Ọhịa Australia na Australia na ngwụsị narị afọ nke 19.
Ọ bụ ndị bi na ya kere ha ndị na-azụ anụ bụ́ ndị ji nkịta zụrụ ìgwè ehi ha zụọ ehi , na umu anumanu ndi ozo, na eji aru aru.
Ntucha a na ikiri ụkwụ na-enye nkịta ndị a aha ha, Blue Heeler ma ọ bụ Red Heeler.
Nkịta ndị a siri ike nyere aka na-eto eto ụlọ ọrụ amịrị na mba.
Achọpụtaghị nkịta na-azụ anụ na United Kingdom, nke a maara dị ka ụdị Smithfield, iguzogide ọnọdụ ọjọọ Australia, oke ihu igwe, na ogologo ụzọ.
Okike ha nke wedakwara n'okpuru ebe a ezughi oke ịzịkọta anụ ụlọ nke oke ugwu Australia.
N'ihi ya, ndị a na-azụ atụrụ, Oke Ala , na Ndị Dalmatian nọ soro ya na dingo nke ohia nke Australia tolite nkịta na-arụ ọrụ siri ike.
A na-anwale ọtụtụ ọdịiche nke obe na mbido, na Scotland’s blue merle colors Highland Collies na-egosi ịbụ ọkacha mmasị mgbe a gafere ya na dingos ọhịa.
Ọnọdụ ndị ọzọ gbasoro iguzosi ike n'ihe na ịhụnanya nke ịnyịnya, na-eke nkịta tụrụ atụ. ,Fọdụ, nke ụmụnne Bagust nwere, ejiri ojii na tan Kelpies gafere iji gbakwunye ume.
Ngwakọta Australian Kelpies rụpụtara na-acha anụnụ anụnụ, na ụdị uhie nke Australian Cattle Dog kere, nke ndị Blue Heelers na-ewu ewu.
E gosipụtara ha na nke mbụ na 1897 site n'aka Robert Kaleski, bụ onye dọpụtakwara ụdị ọkọlọtọ maka Australian Heelers, na-eji dingo dịka isi nke esi arụ ọrụ.
A kwadoro ụkpụrụ ndị a na 1903 site na Kennel Club nke New South Wales, na aha Australian Heeler mechara bụrụ nke a na-akpọkarị Dog Cattle Australian.
Otu American Kennel Club (AKC) matara ụdị a na 1980, nke bụ isi n'okpuru klaasị dị iche iche, tozuru oke igosi na ndị ọrụ na Septemba nke afọ ahụ.
Na Jenụwarị nke 1983, a kpọgara Nkịta Cattle Australia na ìgwè ndị ọzụzụ atụrụ.
Lelee Nkịta Ọhịa Australia na-azụ ihe na vidiyo a:
Taa, ndị na - acha uhie uhie na ndị na - acha uhie uhie dị ka dingo nke ọhịa, na agba uwe bụ nke kacha dị iche.
Ha bụ kọmpat, sie ike, ma kwụsie ike nkịta , na-enwe ihe yiri ya na dingo, ma ọ dị ntakịrị ma nwekwuo ahụ ike.
Ahụ ya dịtụ ogologo karịa ka ọ dị elu, ebe igbe ya dị omimi na ubu ya sara mbara.
Thekwụ kwụ ọtọ na ụkwụ gbara gburu gburu na mkpịsị ụkwụ dị mkpụmkpụ. A na-eme ka ọdụ ha dị ogologo dị ala, na-eji obere usoro.
Dogsfọdụ nkịta na-arụ ọrụ ga-enwekwa ọdụ ọdụ ha na United States, ọ bụ ezie na amachibidoro omume a n'ọtụtụ akụkụ ụwa ndị ọzọ.
Ha nwere isi sara mbara, nke gbagọrọ agbagọ nke nwere jaws siri ike, dị ike, olu gbara ọkpụrụkpụ, ọnụ ọchị na-emenye ụjọ na ọnya na-egbu egbu, na oke dị larịị, ntị kwụ ọtọ.
Otu imi ojii na oji gbara ọchịchịrị oval anya mezue ọdịdị ha.
Kedu nnukwu nkịta Ọhịa Australia na-enweta?
Nkịta Ọhịa Australia na-eguzo gburugburu Inwe 17 ruo 20 (43 ka 51 cm) toro ogologo na akpọnwụ wee tụọ n'etiti 30 na 50 pound (14 na 23 n'arọ) .
Mụ nwoke na-adịkarị n'etiti Sentimita 18 ruo 20 (46 ruo 51 cm) , na nwanyị dị ntakịrị karịa na Inji 17 ruo 19 (43 ruo 48 cm) n'ịdị elu.
A na-ahụta Nkịta Ehi Ọstrelia tozuru oke n’ihe dịka ọnwa 18 ruo afọ abụọ.
Ọ bụ ezie na nkịta dị obere, ụdị ike a siri ike bụ adabaghị nke ọma n'ụlọ obibi ma choro ugbo, ulo anumanu, ma obu ma obu opekata mpe ulo nwere ezi ogige ebe ha nwere ike ighari, gbaa oso ma nyocha.
Ọ bụ ezie na ha hụrụ ịnọ n’èzí, nkịta ndị a kwesịrị ibi n'ime , karịsịa n’abalị, ọ gaghị eme nke ọma ma ọ bụrụ na ọ kewapụrụ ya na ezinụlọ ya ogologo oge.
A naghị anabata Nkịta Ehi Australia dị obere.
A na - emepụta obere ụdị nke ụdị a site na ịgwakọta nkịta ndị a na obere ụdị, dịka Shih Tzu ma ọ bụ Dachshund, ma ọ bụ na-agba ọsọ na-agba ọsọ.
Agbanyeghị, nkịta ndị a nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu ahụike yana ọ kacha mma izere.
Uwe nke Australian Cattle Dog
Queensland Heelers nwere a abụọ uwe , esịnede a obere, ok undercoat na a ire ụtọ, Uwe elu mmiri na-eguzogide mmiri . Ihe mkpuchi nke mpụta kwụ ọtọ, nwee ntutu ogologo dị ogologo.
Nkịta Ọhịa Australia batara abụọ agba iche , ya bụ Blue Heeler na Red Heeler.
Dị ka aha ndị ahụ na-egosi, agba nkịta a bụ ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ oji na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ nke ojii Heeler ma ọ bụ na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na tan maka ụdị Red Heeler dị iche iche.
Mgbe ụfọdụ, a na-etinye uwe mkpuchi nkịta Blue Heeler na-acha anụnụ anụnụ nke nwere uwe na-acha anụnụ anụnụ nke nwere akara tan na isi, obi, agba, akpịrị, na ụkwụ. A na-akpọ Blue Heelers mgbe ụfọdụ dị ka inwe agba agba.
N'aka nke ọzọ, Red Heeler na-acha uhie uhie, na-acha uhie uhie na mgbe ụfọdụ ọ na-acha uhie uhie na-acha ọbara ọbara n'isi. A na-akpọ nkịta a nkịta mgbe ụfọdụ ma ọ bụ aja aja Australia.
Site na nkịta abụọ ahụ, a na-ekesa obere patches na ticking na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha uhie uhie n'ụzọ zuru oke karịa uwe elu ọcha. Achọghị akara ojii ojii maka nkịta ngosi.
Ọ nwere ike isiri gị ike ịkọ ụcha Nkịta Ehi Australia dị ka nkịta n'ihi na nkịta ndị a bụ amuru ọcha, n'agbanyeghị ma ha bụ ndị acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ọbara ọbara iche iche.
Nke a bụ àgwà e ketara n'aka mmetụta Dalmation. Enwere ike ikpebi agba mgbe ụfọdụ site n'ile anya na pad ha.
Ezigbo agba nke nkịta ga-amalite ịzụlite naanị mgbe Nkịta Ọrịa Australia gị ruru ihe dị ka izu anọ.
Ọ bụ ezie na dị nnọọ njikere ma na-eguzosi ike n'ihe nye ezinụlọ ha, Nkịta Ehi Australia anaghị eme nkịta kacha mma maka ezinụlọ nwere obere ụmụaka.
Bredị a na-eche rapara onwe ha na otu onye ma nwee ike ịkpachapụ anya nke ndị si mba ọzọ.
A na-akpọ ha mgbe ụfọdụ dị ka nkịta velcro n'ihi ọdịdị ha ịrapara n'ahụ otu onye n'oge niile ma kpọọ asị ịhapụ onye ahụ maka ogologo oge ọ bụla.
N’ihi ya, ha anaghị eme nke ọma ma a hapụ naanị ha ruo ogologo oge ma nwee ike ịkpa àgwà ndị na-ebibi mmadụ, dị ka igwu ala ma taa ata.
Ha huru mmiri n'anya ma nwekwaa obi igwu mmiri, na-abanyekarị n'ime ọdọ mmiri ma ọ masịrị gị ma ọ bụ na ịchọrọ.
Ha nwekwara ike ịbụ na-enyo ụmụaka enyo onye enwere ike ihu dika ihe iyi egwu n'ihi na ha na-eme ihe n'echeghị echiche ma gosiputa omume na-enweghị atụ.
N'ihi nke a, ebumpụta ụwa nke ọzụzụ anụ ụlọ na omume nnabata na-atụkarịkarị ụmụaka na obere anụ ụlọ.
Dị ka nkịta na-ekwu okwu, ha ga-agba ara na ọbụna taa aru mgbe ha na-egwu egwu ma nwee ike isi ike na ụmụaka na anụmanụ ndị ọzọ.
Ha ike anụ oriri pụtakwara na ha ga-enwe mmasị karịsịa na nwamba, squir, na rabbits.
Nke ahụ kwuru, Nkịta Ọhịa Australia nwere ike ịdị na mma na nkịta ndị ọzọ ma ọ bụrụ na e webatara ha dịka nwa nkita.
Agbanyeghị, ha na-enwere onye ahụ ha họpụtara anyaụfụ ma ọ bụrụ na ejiri nlebara anya tinye nkịta ọzọ.
Ọdịdị a na-arụ ọrụ, ụdị ịzụ anụ, na nrara ndị nwe ya emewo ka ụdị nkịta a bụrụ nke ndị ọrụ ugbo na-ewu ewu. Ha na-arụ ọrụ na nkịtị ma na-agbasaghị ịkwa ụja, dị ka nkịta ọhịa.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ilebara ike dị elu ha nwere iji gbochie ike ọgwụgwụ nke na-abanye n'ime. Ọzọkwa, ha maara ihe, ma ọ bụ jiri obi ha kee ihe chọrọ ọzụzụ na-agbanwe agbanwe ịchịkwa.
Ndi Nkịta Ehi Australia na-eme ihe ike?
Iguzosi ike n’ihe nke onye nwe ụlọ a na-eguzosi ike n’ihe na-eme ha nche nche ; agbanyeghị, dịka e kwuru, atụla anya na ụdị a ga-agbasa.
Ha nwere ike iwe na nkịta ndị ọzọ, na ndị bịara abịa na ọzụzụ siri ike ga-achọrọ site na nkịta iji chịkwaa ma mee ka ọchịchọ ndị a mara nke ọma.
Ọ bụrụ na a na-ahapụ Nkịta Ọchịchị Australia ka ọ bụrụ onye ndu ndị ndọrọndọrọ, mgbe ahụ agwa ọjọọ ha nwere ike iweghara ya, na-eme ka ha lụso nkịta ndị ọzọ ọgụ.
Obi dị m ụtọ na ụdị a dị mfe ịzụ; agbanyeghị, achọrọ ụdị ịke siri ike ma sie ike.
Nkịta nkịta a dị mma bụ n'ihi ogologo oge ha jiri mee nkịta na-arụ ọrụ na ebe a na-azụ anụ.
Dika a na-edozi Nkịta Ehi Australia ka ọ ghara ịnagide ebe ala Australia na-asọ oyi na oke okpomọkụ, ha bụ oke nkwekorita na nkịta siri ike .
Ha bụ dị mma maka ihu igwe ọ bụla , ọbụna oyi na-atụ oyi, n'ihi ekele mkpuchi abụọ ha.
N'ihi ya, Australian Cattle Dog abụghị ụdị nwere nnukwu mkpa nlekọta. Ọdịdị ha lekwasịrị anya na-eme ka ha nọgide na-arụ ọrụ ọbụlagodi na mgbu ma ọ bụ merụrụ ahụ ma ọ bụ oke oyi.
Ya mere ikwesiri ịkpachara anya mgbe ị na-elekọta ma na-elekọta ìgwè a.
Ihe ịrịba ama na nkịta gị na-agba mgba nwere ike ịgụnye ịkwanye, ịma jijiji, ịmị ụda, ịkwa ákwá, na ịtinye ọdụ ha n'okpuru ahụ ma bulie ụkwụ ha n'ala.
Kedụ ka m ga-esi na-etinye Nkịta Cattle Australia n'ọrụ?
Nke a na ike ume ozuzu ìgwè ọ na-eto nke ọma ma e nye ya ọrụ ga-achọ ọtụtụ egwuregwu na mmega ahụ iji nwee obi ụtọ.
E wezụga ihe omume ọzụzụ atụrụ doro anya, nkịta a na-enwekwa mmasị ịgba ọsọ ma rụọ ọrụ ebe ha na onye nwe ha hụrụ n'anya na-arụkọ ọrụ, dị ka ahụ ike, egwuregwu nkịta, nrube isi, mgbako, frisbee na flyball.
Ha na-eme ezigbo ndị enyi maka ndị ọgba ọsọ na ndị na-agba ụkwụ na mkpa ogologo ije ma ọ bụ jog kwa ụbọchị. Ha maara nke ọma n'ịga ogologo njem n'adaghị mbà.
Mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ ahụ, jide n'aka na ị gaghị ekwe ka Heeler gị jee n'ihu gị. Site na ịmanye nkịta gị ịga ije n'akụkụ ma ọ bụ n'azụ gị, ị ga-ewusi ike na ị bụ alfa na mkpọ ahụ.
Ọ bụrụ na a na-enye ha mmega ahụ kwa ụbọchị ma ọ dịkarịa ala otu na elekere abụọ kwa ụbọchị, ụdị a ga-enwe afọ ojuju ị dinara n'ihe ndina ha ma ọ bụ akpati ma ghara igosipụta omume hyperactivity.
Ọ bụ ezie na ntị ha nwere ume ga-adị njikere mgbe niile maka ihe ọ bụla na-adịghị ahụkebe.
Ego ole ka m kwesiri inye nkịta Ọhịa Australian m?
N'ihi oke ike ha na ọdịdị ọrụ ha, Australian Heelers chọrọ nri nkịta jupụtara na nri na vitamin iji gbakwunye akwara na uche ha.
Chọọ nri nkịta ebe isi ihe dị na protin , dị ka ehi, ọkụkọ, na azụ. Ekwesịrị ịde ọka na inine dị ka ihe na-esote na nri ị họọrọ.
Akọrọ kibble ga-enyere ọcha ha nri na chịngọm, ma i nwere ike ịchọpụta na dị ka gị nkịta na-etolite, ha kibbles mkpa ka ha tinye ma ọ bụ mkpa ka ịgbanwee gaa na nri mkpọ, nke dị mfe na digestive usoro.
.B. akwadoro ego nke 1.5 ka 2.5 iko nkịta nri ga-enye nkịta gị kwa ụbọchị, kewaa n'etiti nri abụọ.
Bredị a nwekwara ike irite uru site na mgbakwunye dị ka glucosamine , nke na-akwalite nkwonkwo ahụike.
Ndi Blue Heelers wụsịrị?
Ọ bụ ezie na Nkịta Ọhịa Australia abughi oke awusi , ha na-agbapu uwe ha otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ na afọ na oge mgbanwe. N'oge a, ha ga-awụpụ ntutu ha na mkpokoro.
Ọ bụ ezie na uwe ahụ n'ozuzu anaghị achọ nlekọta dị ukwuu, ịsụchasị ahịhịa na ahịhịa dị otu ugboro n'izu ga-eme ka nkịta gị dị ọcha ma nwee unyi.
Nwere ike ịmịchaa ugboro ugboro n'oge oge ịkwafu dị arọ iji wepụ ntutu isi ahụ nwụrụ anwụ. Otu ụdị dị ọcha ma dị mma n'ozuzu ya, Nkịta Ọhịa Australia adịghịkwa ada ada.
Sa ahụ chọrọ naanị mgbe ọ dị mkpa, mana ezé kwesiri ịsachasị ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'izu iji gbochie ikpo tartar.
Ọzọkwa, gbalịa belata mkpụmkpụ nkịta gị kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ha eyighị ha n'ụzọ nkịtị, ma lelee ntị kwa izu maka isi ọ bụla ma ọ bụ ọbara ọbara, nke nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke ibute ọrịa.
Ogologo oge ndụ nke Australian Cattle Dog bụ n’agbata afọ iri na abụọ na iri na isii . A Blue Heeler ugbu a na-ejide aha nke nkịta kacha ochie na Guinness Book of World Records . Bluey biri ndụ dị egwu nke 29.5 afọ.
Mgbe ị na-enweta nwa nkịta Australian Heeler, ị kwesịrị ịtụ anya ịhụ mkpochapụ maka hip na ikpere dysplasia, von Willebrand's ọrịa, na hypothyroidism sitere na Orthopedic Foundation for Animals (OFA).
Enwere ike ịtụ anya nhichapụ ahụike nke na-egosi n'anya nkịta ahụ, yana enwere ike ịnwale ule thrombopathia si Mahadum Auburn. Asambodo ndị a nwere ike-enyocha tupu ịzụrụ nwa nkita na OFA weebụsaịtị .
Dị ka ike, nkịta egwuregwu, Australian Heelers nọ n'okpuru ọtụtụ ọrịa ndị na-emetụta nkwonkwo na akwara .
Tinyere dysplasia hip, nke nwere ike ibute mgbu na ngwụsị, otu nsogbu ahụike nke nwere ike imetụta gị Australian Cattle Dog bụ Progressive Retinal Atrophy (PRA). Ọrịa anya a na - eme ka retina mebie.
Ntịchi ọnụ bụkwa ihe a na-ahụkarị n'ụdị a; agbanyeghị, enwere ike ịnwale nke a mgbe nkịta gị bụ nwa nkịta, ma ekwesighi ịkọ nkịta nne na nna ntị chiri.
A purebred Australian Cattle Dog nwa nkita nwere ike efu ihe ọ bụla site na $ 250 ruo $ 1,100 , dabere na agbụrụ nne na nna, onye na-azụ ya, ọnọdụ ya, wdg.
Ọnụ ọgụgụ a na-edobe agba nwerekarị ihe dị n'etiti nkịta na abụọ, nke nwere nkịta ise.
Na mgbakwunye na ọnụahịa nke ịzụta Blue ma ọ bụ Red Heeler, ị kwesịrị ị na-emefu ego na mmefu ahụike kwa afọ, dịka ọgwụ, nleta ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ, na deworming, nke nwere ike ịgụta ihe ruru $ 600 na $ 800 kwa afọ.
Ndị Ọhịa Dog ndị Ahịa Australia
Ọ bụ ezie na a na-azụkarị nkịta ndị a dị ka nkịta nkịta, ị nwere ike ịchọpụta na ha na-aga na ọnụ ahịa dị mma site na ndị na-edebanye aha na-edeghị aha.
Agbanyeghị, rụọ ọrụ ụlọ gị oge niile iji lelee ọnọdụ ozuzu, ahụike ndị nne na nna, yana akụkọ gbasara ahụike tupu ịzụrụ nwa nkịta Ọchịchị Australia.
The Australian Cattle Dog Club of America nwere koodu nke ụkpụrụ omume maka ndị na-azụ ihe na ndepụta nke ndị na-azụ ihe a ma ama na weebụsaịtị ha .
Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-azụ nkịta nke Cattle Australian iji bido ịmalite nyocha gị maka pup zuru oke:
Sugar N Spice Australian Ehi Nkịta , Goodyear, Arizona
Cgwè ihe mkpuchi ACD , Waddell, Arizona
Australian Cattle Dog nnapụta / maka nkuchi
A na - azụta Nkịta Cattle Australia mgbe ụfọdụ ndị nwe ha na - amaghị ụdị mmadụ siri ike ma na - agba mgba maka inwe otu. Yabụ na ị nwere ike oge ụfọdụ ịchọta nke dị na nnapụta ma ọ bụ ebe obibi.
E nwere ọtụtụ otu nnapụta Dog dị na Australia ebe ị nwere ike ịchọ nkịta na-achọ ebe obibi ịhụnanya.
The Australian Cattle Dog Nnapụta Inc. bụ otu nzukọ dị otú ahụ nke na-enye njikọ maka ụlọ ọrụ nnapụta na bipụtara nkịta dịnụ peeji Facebook ha .
I nwekwara ike gbalịa ịchọ Blue Heeler maka nkuchi na saịtị ndị a:
Nnapụta Nkịta Ehi Texas , Texas
Otu Egwuregwu Nkịta Ọhịa Ohio , Ohayo
Carolina ACD nnapụta na mgbapụta , Carolina
Fọdụ Ngwakọta Nkịta Ọhịa Australia na-ewu ewu taa.
Gafe Blue Heeler ma ọ bụ Red Heeler na ụdị ọzọ nwere ike ime ka nkịta nwee ụdị pụrụ iche, agba mara mma nke ụdị a mana ya na ụdị nkịta ọzọ, na-eme ka ha bụrụ ezigbo ndị enyi.
Fọdụ ndị na-ewu ewu Blue Heeler mixes gụnyere Corgi Heeler, Beagle Heeler, Box Heeler, na Blue Cocker Spaniel. Ka anyị lebakwuo anya na ihe ndị ọzọ na-ahụkarị Ngwakọta Nkịta Ọhịa Australia:
Igwe Pull Blue Heeler mix
Izute Kroki, Pit Heeler (Pit Bull Blue Heeler mix) - Isi ihe onyonyo
The Pit Heeler bụ ọkara Blue Heeler na ọkara American Pit Bull Terrier.
Musdị muscular a ma sie ike na-eto gburugburu 24 sentimita asatọ (61 cm) n'ịdị elu ma nwee ọdịdị na-eyi egwu nke na-eme ha ọmarịcha nche.
Dịka ụdị ike siri ike, Pit Heeler chọrọ ọtụtụ mgbatị na ọzụzụ. Ha bụkwa nkịta a raara onwe ha nye nke na-achọ nlebara anya site n'aka mmadụ ha.
Siberia Husky Blue Heeler mix
Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Siberia) Isi ihe onyonyo
Gafere nkịta Cattle nke Australia nwere Siberia Husky, ị ga-enweta ụdị anụ ọhịa na-arụsi ọrụ ike na draịvụ ike siri ike.
A makwaara dị ka Ausky, nkịta a na-achụ ụmụaka na obere anụmanụ ma chọọ ọtụtụ ọzụzụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji mee ka ha chịkwaa.
Zute Liesel, onye German Onye Ọzụzụ Atụrụ Blue Heeler mix - Isi ihe onyonyo
Otu ụdị dị ike, German Shepherd Australian Cattle Dog mix, nwere ike itolite na gburugburu 25 sentimita asatọ (64 cm) toro ma tụọ n’etiti 30 na 95 pound (14 na 43 n'arọ) .
Dika ìgwè ndi nwere agwa nchebe, ha na-eme nkịta na-eche nche nke ọma mana ha adabaghị nke ọma maka ndị nwe anụ ụlọ novice.
Bredị a na-enwekwa ike ịwụfu nnukwu mmiri na mkpa dị ukwuu, n'ihi nnukwu akwa uwe ha abụọ.
Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịdị mma n'anya, Nkịta Ehi Australia adabaghị nke ọma na ndị nwe ụlọ oge mbụ na onye obula bi n’ulo.
Bredị a chọrọ nnukwu mmetụ nke anụ ahụ na nke uche ma nwee ike igosipụta omume ike ma ọ bụ mbibi na-enweghị ọzụzụ na nlebara anya kwesịrị ekwesị.
Nke ahụ kwuru, ndị nwe ugbo ma ọ bụ ndị nọ n'ọrụ ga-ahụ iguzosi ike n'ihe ụdị ìgwè a pụrụ iche n'anya, ọdịdị nchedo, na ume ike.
Otutu udiri anumanu yiri nke a yiri nke Australian Cattle Dog na anya ma nwekwaa otu agwa.
Lelee ụdị anụmanụ ndị a iji chọpụta ụfọdụ myirịta na ọdịiche dị n'etiti nkịta ndị a na Blue Heeler:
Collie na-acha uhie uhie
Onye Belgium Malinois
ọkara ụlọ ọkara German shepard
nwa shih poo tozuru oke
mix collie/aussie mix
chihuahua agwakọtara ya na nkịta ọhịa
kedu ihe sable German onye ọzụzụ atụrụ dị